Umgaqo-nkqubo weVisa waseNdiya wabemi base India phesheya kwe-2020
Kwintshukumo yokuqala yendlela yokuvula uhambo lwehlabathi, Urhulumente waseIndiya iphinde yabuyekeza i-visa kunye nemida yokuhamba kwii-Overseas Citizens of India (OCI) abanini makhadi ukuba batyelele ilizwe.
Ukuhamba kubanikazi bamakhadi be-OCI kwizigaba ezine kuvunyelwe. I-OCI ayifuni Indian Visa ekwi-Intanethi (eVisa India)
Oku kubandakanya abantwana abancinci abamele ukuya kubemi baseIndiya phesheya;
OCI bamakhadi abanqwenela ukuza eIndiya ngenxa yeengxaki zosapho njengokudlula kosapho;
Isibini apho iqabane elinye lobomi lingumnini wekhadi le-OCI kwaye elinye lilizwe laseIndiya kwaye banokuhlala ngokuhlala e-India; kwaye
I-understudies yaseKholeji engabanikazi bamakhadi e-OCI (hayi ngokusemthethweni) kodwa abagcini babo ngabahlali baseIndiya abahlala eIndiya.
Kwisicelo esitsha esinikwe nge-22 kaMeyi 2020, inkonzo ye-Union home yathi ukuhamba kunganyanzelwanga kwakudala ayizukubakho kwezi zinto zibekiweyo ezingafakwanga moya, isikhephe nohambo lukaloliwe nangaphaya zingahamba ngesinye isithuthi esithunyelwe ukubabuyisela esizweni.
Okwangoku, intsalela yezithintelo ekunyanzelweni kuhambo lwehlabathi iya kuqhubeka. Nokuba kunokuba kunjalo, imithombo yaseburhulumenteni ithe oku kukuqala kokuvulwa kohambo lwehlabathi kwaye imigaqo-nkqubo ye-COVID-19 iya kuhlala isisixhobo kubo bonke abahambi.
Nokuba kunjalo, iindawo zokuphumla ze-visa zifuna abanini makhadi be-OCI, kwaye ngokuthe ngcembe bathambekele ngaphandle kwesiqhelo ukuba ukuhamba komoya kuya kuvulelwa nolunye uhlahlelo lwe-visa.
Ukusikelwa umda kokunyanzelwa yi-India kwakufike xa uninzi lwamazwe lwaluvalele ukuhamba ngenqwelomoya. Ngokuphuma kwamazwe kwimowudi yokutshixa, abaphathi bagcina iwotshi ekufuphi kuphuculo kwihlabathi liphela ukuqinisekisa ukuba eyayo inkqubo yevisa ayiguquki ibe kukujika kophuhliso lwabaphandi abangena phantsi kweeklasi ezahlukeneyo.
Nge-5 kaMeyi, indlu yowiso-mthetho igcine i-visa yokuhamba simahla kwiofisi ye-OCI de kwabe kungavunyelwanga ukuba kuthathwe uhambo ngabahambi ukuya nokubuya eIndiya. Ukugcwala kwabantu kwihlabathi liphela ngaphandle komhlaba bekulinganiselwe, kwaye nabuphi na abantu bangaphandle, kubandakanywa nabaninimakhadi be-OCI, bebesondelwa ukuba banxibelelane ne-visa zabo ezisondeleyo kwimeko apho banento ekhuthazayo yokuya e-India.
Ngomhla we-18 ka-Matshi ngo-2020 indlu yowiso-mthetho yayinqamle ngaphandle kwe-VIWA abanamakhadi e-VCI ngenxa ye-COVID-19 flare-up kwaye nge-6 ka-Meyi ivakalise ukuba igcinwe ukumiswa kwamacandelo amaninzi amaphepha-mvume anzulu anikwa abanini makhadi be-OCI kude. ukuqalwa kokuhamba kwehlabathi.
Nokuba yeyiphi na, bekukho inkcaso phakathi kwabantu abavela e-Indiya kwihlabathi liphela abangakwaziyo ukubuyela e-India ngenxa yemicimbi, umzekelo, abantwana babo abasandul 'ukuzalwa abangabanini bamakhadi e-OCI okanye abangakwaziyo ukuhamba ekhaya kuso nasiphi na isiganeko, ngenxa yeengxaki ngenxa yokumiswa kweevisa zabo.
I-Visa yaseIndiya yabakhenkethi, amashishini kunye nezonyango
I-Indian Visa kwi-Intanethi (i-eVisa India) yabo bahlala eIndiya isebenza ngokusisigxina ngexesha lo bhubhani we-COVID. I-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi (i-eVisa India) ngoku iye yanqunyanyiswa okwethutyana njenge-27th ngoMeyi 2020 kude kufike esinye isaziso. URhulumente wase-Indiya unqwenela ukuvula i-International Border ye-Indiya ngoJuni / Julayi 2020 ukuba abantu bamanye amazwe bangene eIndiya.
Iiklasi ze-Indian Visa Online (eVisa India) zezi I-Visa yaseIndiya yoKhenketho, I-Visa yaseIndiya yoShishino, I-Visa yaseIndiya yoNyango, I-Visa yaseIndiya yokufika kwiGqirha.
Isicelo seVisa saseIndiya ikwi-Intanethi kwaye ukufunyanwa kwe-eVisa yase-India nge-imeyile.